भरतपुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डा. रुद्रप्रसाद मरासिनी र टेण्डर पार्न सफल हस्पीटेक इन्टरप्राइजेज प्रालिका बीच उपकरण ल्याउने सम्झौता भएको हो । अस्पतालले निकालेको टेण्डर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भाद्र १५ गते स्वीकृत गरेको थियो ।
स्वास्थ्य सचिव सेनेन्द्रराज उप्रेतीले अस्पतालले सिटी मेशिन खरिदका लागि निकालेको टेण्डर पार्न सफल हस्पीटेक इन्टरप्राइजेज प्रालिको टेण्डर स्वीकृत गर्नुभएको थियो । टेण्डर स्वीकृत भएसँगै सम्वन्धित कम्पनीसँग अस्पतालमा मेशिन ल्याएर जडान गर्ने गरी सम्झौता भएको अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डा.रूद्रप्रसाद मरासिनीले जानकारी दिनुभयो ।
सफल हस्पीटेक इन्टरप्राइजेज प्रालिले केही महिना भित्र अस्पतालको पुरानो अप्रेशन कक्षमा सिटी स्क्यान मेशिन सेटअप गरी अस्पताललाई हस्तान्तरण गर्ने छ । क्रोनरी एनजिओग्राफी गर्न मिल्ने अत्याधुनिक सिटीक्यान मेशिन मेशिन ल्याउनका लागि अस्पतालले गत जेष्ठ १० गते ४५ दिनको अवधि राखि ग्वोवल टेण्डर आब्हान गरेको थियो। यस्तो मेशिन राजधानी बाहिरका सरकारी अस्पतालमा अन्यत्र कहि पनि उपलब्ध नभएको अस्पतालले दावी गरेको छ।
सिटी स्क्यान मेशिन खरिदका लागि नेपाल सरकारले ८० प्रतिशत रकम खर्च व्यहोर्ने छ भने, भरतपुर अस्पताल बिकास समितीले २० प्रतिशत खर्च व्यहोर्ने छ । करिव ६ करोड ५० लाखमा उपकरण खरिद गर्न लागिएको हो । नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले जेष्ठ ५ गते भरतपुर अस्पताललाई सिटीस्क्यान मेशिन खरिदका लागि बजेटको सूनिश्चितता गरेको पत्र प्रदान गरेको थियो ।
मेशिन उपलब्ध गराउने कम्पनी वा सँस्थाले अस्पतालले दिएको स्थानमा आवश्यक सबै भौतिक पूर्वाधार तयार गरी उपकरण जडान गरेर कोठाको चाबी उपलब्ध गराउने छ । भरतपुर अस्पतालमा मदन भण्डारी ट्रमा सेन्टर समेत शुरू भईसकेको अवस्थामा चोटपटक र दुर्घटनामा परेका घाइतेहरूको उपचारका लागि पनि सिटीस्क्यान मेशिन अत्यावश्यक भएको अस्पताल बिकास समितिका अध्यक्ष विजय सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
“भरतपुर अस्पताल र यस अस्पतालबाट सेवा लिने सबै जनताका लागी उपकरणका हिसावले यो एउटा कोशेढुड्डा हो,” अध्यक्ष सुवेदीले भन्नुभयो, “अब गरीव जनताले सस्तो र सुलभ मुल्यमा गुणस्तरीय सेवा लिने छन्, वाहिरका अस्पताल वा सेन्टरहरूमा महंगो मूल्य तिर्नुपर्ने छैन् ।” एनजिओग्राफी सहितको सिटीस्क्यान मेशिन उपलब्ध भएपछि अस्पतालले कार्डियोलोजी सेवा पनि विस्तार गर्ने तयारी थालेको छ। अस्पतालका मेसु डा. रूद्रप्रसाद मरासिनीले १२८-स्लाइसको सिटीक्यान मेशिन अहिलेसम्मकै पछिल्लो भर्सन भएकोले चितवनका अन्य अस्पतालका बिरामीहरूले पनि सुपथ मुल्यमा भरतपुर अस्पतालबाट सेवा लिन सक्ने बताउनुभयो ।
डा. मरासिनीले भन्नुभयो, “गरीव जनता, भरतपुर अस्पतालका लागि यो निकै खुसीको बिषय हो, अस्पतालले मारेको एक फड्को पनि।”